August 2019 - Page 3 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
August 20, 2019 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada PSF iyo ciidanka booliiska gobolka Bari ayaa xalay fiidkii fashiliyay qarax lagu aasay waddo kutaala magaalo xeebeedka Boosaaso, sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha ciidanka booliiska gobolka Bari Xuseen Cali Maxamuud. Waxa […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa qaaday duqeyn diyaaradeed oo ay la beegsanayaan maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan gudaha Soomaaliya, sida taliska Mareykanka ee Afrika ay ku sheegeen war-saxaafadeed maanta oo Talaado ah. Duqeynta ayaa maanta […]
The U.S. military says it has conducted an airstrike targeting an al-Shabaab militant in the vicinity of Qunyo Barrow, Somalia, killing a militant. In a statement, U.S. Africa Command says the airstrike was carried out […]
August 19, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Xubnaha cusub ee guddiga doorashooyinka Puntland ayaa maanta oo Isniin ah la dhaariyay iyada oo uu goobjoog ahaa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. Madaxweynaha oo dhaarta kadib hadal kooban jeediyay ayaa yiri: “Sharafweyn bay […]
August 18, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Axad ah u safray dalka Jabuuti. Farmaajo ayaa martiqaad ka helay dhiggiisa Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, waxaana safarkiisu uu qaadan doonaa muddo labo […]
August 17, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Sabti ah magacaabay shan kamid ah guddiga doorashooyinka Puntland. Asbuucii la soo dhaafay, baarlamaanka Puntland ayaa soo magacaabay afar kamid ah guddiga. Guddiga ayaa isku […]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta oo Sabti ah dib u doortay Shiikh Cabdi Maxamed in uu noqdo guddoomiyaha cusub ee afarta sanno ee soo socota. Shiikh Cabdi oo ahaa guddoomiyihii hore ayaa […]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Doorashada madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ayaa dib loo dhigay muddo saddex beri ah, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka. Bayaan ay soo saareen xalay goor dambe, guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa sheegay in ujeedadu tahay […]
August 16, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada booliiska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Jimce ah toogasho ku dilay afar qof gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Afarta qof oo ay midi gabar tahay oo la sheegay in ay […]
August 15, 2019 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Wefdi ka socda beesha caalamka oo uu hoggaaminayo wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta oo Khamiis ah tagay magaalada Kismaayo. Wefdiga ayaa waxaa kamid ahaa urur goboleeda IGAD, safiirka […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) A car bomb killed at least one person in the Somalia’s capital Mogadishu, sources say. The incident happened on Monday noon at Souk Ba’ad in Yakhshid area of Mogadishu. State-run Sonna news agency [...]